5 talooyin ku saabsan Windows Media Player in daaqadaha 7/8
Windows Media Player waa mid ka mid ah ciyaartoyda loogu jecelyahay saxaafada ka mid ah dadka. Waxaa yimaado pre-rakibay la nidaamka qalliinka daaqadaha. Waxaa jira isbedel badan in aad sameyn kartaa in aad hadda jira windows media player sida beddelo haraggiisii ​​/ theme ama duuban update ugu dambeeyay.
Qaybta 1: Waa maxay version ee Windows Media Player in daaqadaha 7/8?
Qeybta 2: Sida loo gab Windows Media Player in daaqadaha 7/8?
Qeybta 3: codec Video for windows media player in daaqadaha 7/8
Qeybta 4: Sida loo abuuro playlists caadadii in ciyaaryahanka daaqadaha warbaahinta 12?
Qeybta 5: Sida loo dayactiro daaqadaha media player in daaqadaha 7/8?
Ogaanshaha version aad windows media player waa mid aad u muhiim ah. Version ugu dambaysay ee daaqadaha media player waa 12 iyo waa ku yimaadda pre-rakibay la Windows 7 iyo 8. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad si aad u hubiso version aad windows media player, si aad u samayn kartaa adigoo soo socda tallaabooyinkan deg deg ah:
Talaabada 1: fur windows media player ka dibna riix menu caawimaadda. Haddii menu caawimaad ma la arki karo, guji Alt + H toobiye ka keyboard.
Talaabada 2: dooro "About" doorasho ka menu caawimo iyo hoos u soco version of windows media player ah.
Windows media player yimaado pre-rakibay daaqadaha ka hawlgala nidaamka sidaas oo kale waa ciyaaryahan caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee haddii aadan rabin in aad isticmaasho ciyaaryahankaan, waxaad had iyo jeer waxay fursad u leeyihiin in ay gab. Waxaad awood karaa / gab wax feature hidi daaqadaha waqti kasta. Fadlan raac tallaabooyinka hoose si aad gab daaqadaha media player in daaqadaha 7/8:
Talaabada 1: fur liiska feature daaqadaha iyada oo guddi gacanta
Tallaabada ugu horeysay ay tahay in la furo interface halkaas oo aad ka arki kartaa liiska mid ah qaababka ay bixiyaan daaqadaha oo dhan. Waxaad ku samayn kartaa xulashada guddi gacanta ka menu bilowga. In guddi ay gacanta ku, dooro "Barnaamijyada" ka dibna riix "noqon daaqadaha qoreysa on ama off".
Talaabada 2: daaqadaha Disable media player
Marka aad furto "qoreysa jeedo daaqadaha ama dibadda" ayuu doorasho, waxaad ka arki kartaa tiro ka mid ah muuqaalada hidi ay bixiyaan daaqadaha ka hawlgala nidaamka. Waxaad u baahan tahay in aad eegto, waayo, "muuqaalada warbaahinta". Sida uu "muuqaalada warbaahinta", waxaad arki kartaa sanduuqa loogu windows media player ah. Waxaa Uncheck in gab windows media player ama bilcaksii si ay u gudato. Riix "ok" badhanka si aad u codsato isbedel ah.
Codec waa gaar ah ku darto on for windows media player oo awood qaababka kale oo badan, waxaa ka. Haddii aad windows media player ma awoodo inuu ciyaaro qaar ka mid ah qaabab file u gaar ah, ka dibna isku day in aad u isticmaali codec ah oo xallin doono dhibaatadan. Caadiga ah codec A taageertaa qaabab badan file kale; taas oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee la isticmaalayo codec windows media player. Halkan waxaa hogaanka 2 video codec for windows media player:
Media Player codec Pack: pack The Media ciyaaryahan codec waa mid ka mid ah baakada codec ugu isticmaalay si weyn loo windows media player. Waxa ay taageertaa tiro ka mid ah qaabab file kale sida VCDs iyo XCDs. Pack codec Tani waa si xor ah laga heli karaa internet.
Windows pack 8 codec: The pack codec daaqadaha 8 waa xirmo buuxda oo muddo ku dhow nooc kasta oo video. Pack Tani waa lacag la'aan ah oo aad si fudud ku rakibi karo windows media player aad daaqadaha 8. pack Tani waxay sidoo kale ku faantaa ee goobaha sare u isticmaala dhamaadka sare.
Playlists guud ahaan waa koox ka mid ah song wada ciyaaro mar uun la siiyo dhigay. Waxaad u abuuri kartaa playlist caado u gaar ah ee windows media player 12. Fadlan raac tallaabooyinka hoose si ay u abuuraan kuu gaar ah playlist caadadii in windows media player 12:
Talaabada 1: fur windows media player adigoo gujinaya ay toobiye ama iyada oo menu bilowga. Demi in aragtida maktabadda ka dibna dooro tab "ciyaaro". Waxaad arki doontaa liiska song ee ay leeg- tahay haddii aad hore u soo ciyaaray qaar ka mid ah heesaha. Riix "liiska cad" in ay nadiifiso heesaha oo dhan.
Talaabada 2: Hadda waxa aad diyaar u tahay in ay bilaabaan ku daray gabayo aad playlist. Waxaad si aad playlist ku dari kartaa hees ay xaq u magcaabo magaca heesta iyo ka dibna "daro in" button. Dooro "liiska play" doorasho ku jira "daro in" menu ku darto song in aad liiska cusub ee ciyaarta. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi heesaha in aad ku darto in aad liiska.
Talaabada 3: Marka aad ku daray heesaha oo dhan si aad u playlist, waxaad si fudud u badali karo si. Si aad u bedesho amarka heesaha, kaliya iyaga u soo guuraan ama.
Talaabada 4: Marka aad ku qanacsan tahay liiska, waxaad badbaadin kartaa playlist by siinaya magaca ku haboon.
Talaabada 5: Haddaba haddii aad doonaysid in aad ka ciyaaro aad playlist, guji kaliya magaca playlist iyo heeso ku jira liiska ku bilaaban doono ciyaaraha. Waxa kale oo aad ku dari kartaa in aad ugu cad cad liiska.
Waxaa jira marar badan marka windows media player joojin doonaa jawaabaya ama shil sida ugu dhaqsaha badan aad u furi doonaa. Si aad u hagaajinno noocan oo kale ah dhibaatooyinka, in aad marka hore u baahan tahay inaad ogaato sababta ugu weyn ee ka dambeeya. Inta badan oo ka mid ah arrimaha windows media player la xiriira dhibaatooyinka maktabadda. Qaar ka mid ah siyaabaha ay aad u hagaajinno kartaa windows media player in daaqadaha 7/8 waa:
Habka 1: Disable iyo awood ciyaaryahan warbaahinta
Haddii aad windows media player sababaya dhibaatooyin aad u, waxaad isku dayi kartaa in ay gab ka mid ah liiska feature daaqadaha ka dibna mar kale awood. Nidaamka aad keeneysaa in dib-u-soo bilowdo ka dib markii ay u suuro-iyo maktabadaha media player mar kale dhisay.
Habka 2: troubleshooter in-dhiseen
Windows yimaado la troubleshooter ah dhamaan barnaamijyada iyo daaqadaha media player ma aha marka laga reebo ah in this. Waxaad isku dayi kartaa in aan bilowno dhibaato marka warbaahinta ciyaaryahan ayaa ku burburtay. Raac tallaabooyinka ku troubleshooter iyo dayactiro aad warbaahinta ciyaaryahan si deg deg ah.
Top 10 Apps wacaya Bilaashka ah ee Windows Phone 2015
Best Video Player Wixii Windows 7 Ultimate 64 Inyar
> Resource > Windows > 5 talooyin ku saabsan Windows Media Player in daaqadaha 7/8